Kayseri Fuzuli Multi-Storey Junction Waxaa Lagu Furay xaflad | RayHaber | raillynews
HometareenkaFusuli Katlı Xawaaladda ayaa laga furay Kayseri
14 / 05 / 2018 tareenka, GUUD, Nidaamyada Tire Wheels, TURKEY
Dowladda Hoose ee Magaalada Kayseri waxay sii wadaysaa inay magaaladeena ugu keento howlo cusub shaqooyin walba. Mid ka mid ah isgoysyada guryaha badan leh ee gaadiid aan kala go 'lahayn oo raaxo leh, Fuzuli Storey Junction waxaa la furay ka qeyb galka Wasiirka Deegaanka iyo Qorsheynta Magaalada Mehmet Özhaseki. Isagoo ka hadlayey xafladda, Duqa magaalada Mustafa Celik, wuxuu sheegay inay dhammeysteen shaqo kasta kahor waqtigii caadiga ahaa ayna u rajeeyeen Fuzuli Multi-Storey Junction inuu noqdo mid laga wada shaqeeyo.
Wasiirka Deegaanka iyo Magaalooyinka Mehmet Özhaseki iyo Duqa magaalada Mustafa Çelik, iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka Süleyman Whip, AK Party Kayseri MP Tamsmail Tamer iyo Hülya Nargis, Taliyaha Garrison Birreek General Ercan Teke, Gudoomiyaha Gobolka AK Party Fatih Hasyüncü, Badhasaabyaasha gobollada, xafiisyada xafiisyada iyo muwaadiniinta ayaa ka soo qaybgalay.
“Himiladayadu waa nabad iyo nolol”
Isagoo ka hadlayey furitaanka Duqa Magaalada Mustafa Celik, Kayseri waa isha ugu muhiimsan ee nabadda iyo farxadda ku jirta dhaqanka horumarka la qorsheeyay, wuxuu sheegay inay ka shaqeynayaan sii wadidda dhaqankan. Ujeeddooyinka ugu muhiimsan ee magaaladan waa nabadda iyo farxadda kuwa ku nool Madaxweynaha Birta, waxay bilaabeen inay dhammaystiraan howsha ka hor waqtiga ay bartilmaameedsanayaan, Fuzuli Storey Junction 2,5 bilood ka hor dhammaadka muddada, ayuu yiri.
Khudbadiisa, Duqa Magaalada Celik wuxuu warbixin ka siiyay Fuzuli Storey Junction wuxuuna ku daray, uzunluk Dhererka udhaxeeya meelaha laga soo galo iyo meesha laga baxo ee marinka hoose ee lagu dhameystiray isgoyska Fuzuli waa xNUMX mitir. Qeybta xiran ayaa dhererkeedu yahay 400 mitir. Mashiinka weyn ee dhererkiisu yahay MNUMX mitir ee 122 waxaa loo dhisay laba wado oo laba dhinac ah. Dhaqdhaqaaqa ciida ee 20 m50.000 waxaa lagu qabtay dhismaha marinka dhulka iyo 3 bin 20 m500 m3 miskaha diyaarka ah iyo 2 kun oo tan oo rebar ah ayaa la isticmaalay. Dhismaha isgoyska-dabaqyada dabaqyada badan leh, dhismayaasha ka socda dhulka hoostiisa, dhismayaasha jidadka iyo darbiga, muuqaalka dhul-beereedka, xariiqinta iyo xargaha tooska ah ayaa la sameeyay 15 milyan oo TLna waa la kharash gareeyey. Maannaan dayicin tikniyoolajiyad iyo suuxinta sida aan uga hawlgalno dhammaan shaqooyinkeenna. Waxaan daba joognaa oo ku dabaqnaa hal-abuurnimada si dhow dhismaha sida maado kasta. ”
Duqa magaalada Mustafa Celik wuxuu cadeeyay in 38 ay bishii ka buuxisay Dawlada Hoose ee Magaalada. Waxaan ku dhammeyneynaa isugeynta 13. Waxaan horay u soo qaadanay baska 80, waxaan qaadanay bas kale oo ah 20, waxaan sidoo kale qaadaneynaa 24 basaska iyo basaska korontada ilaa Sebtember waxaana yareyn doonaa celceliska da'da basaska diyaaradaheena ilaa 5,2. Dhanka kale, waxaan dhammeystirnay mashaariicaha xariiqda nidaamka tareenka. Wasaaradda Gaadiidkayadu waxay bilaabi doontaa dhismaha khadka Wadnaha ee Gobolka muddo gaaban. Waxaan bilaabi doonaa khadka Talas-Homeland. ”
Madaxweynaha sheegayaa adeegga Steel iyo maalgelin kale oo ka dhigay in meelo kala duwan, ayuu yidhi Dhanka kale, mashruuca cusboonaysiinta magaalooyinka Turkey ugu weyn oo ugu adag in ay bilaabeen in ay Sahabiye noolaynta Project Urban, oo ay xitaa ma groundbreaking xafladda. Duqa Magaalada Celik steel, Fuzuli Storey Junction dhamaadka rajeynta inuu ka faa iideysto.
Guddoomiyaha gobolka Süleyman Kamçı, oo ka hadlay xafladda, ayaa muujiyay sida uu ugu faraxsan yahay in la arko maalgashiyada horumarinaya iyo xoojinta kaabayaasha gobolka. Isku xirka Fuzuli Multi-Storey Junction ee Magaalo Weynta Magaalada oo waqti gaaban la dhammeystiray iyadoo shaqadii loo igmaday uu qabtay Gudoomiyaha Emre ayaa carabka ku adkeeyay, u mahadceliyay kuwa ka qeyb qaatay mashruucan.
KARI WADA DALKA URBANISM EE KAYSERİ ”
Wasiirka Deegaanka iyo Magaalooyinka Mehmet Özhaseki oo ka qeyb galaya xafladda toddobaad kasta oo ka dhacay Kayseri, ama aasaaska u dhigay shaqada wanaagsan ama wuxuu sheegay in furitaanka Kayseri lagu xasuusto sanado badan oo leh astaamo qurux badan, ayuu yidhi. Wasiirada ku adkeeyay in gobolladiisa deggan oo dhan u ogaadaan Magaaleynta ee Turkey Mehmet Özhaseki, "Horumarinta yimaado bilowga ah ee gobolka Kayseri in bixisaa smoothest iyo horumarinta. Fahamka dawlada hoose ee Kayseri ayaa ka muuqatay magaalada oo dhan. Ma jiro magaalo kale oo furan oo badan.
oo ku saabsan dib u dhiska ah ee Xeerka Nabadda iyada oo baarlamaanka khudbad Özhaseki sidoo kale ku siin wasiirka warfaafinta, wuxuu sheegay in ay isticmaali doonaan ilo soo socda halkan iyo u diyaargarowga dhulgariir in Isbadal magaalooyinka Turkiga. Wasiir Özhaseki, wuxuu dalku bilaabi doonaa inuu ka turjunto isbedelka weyn ee lagu arki doono dhaqaalaha, ayuu yiri. Duqa magaalada Mustafa Celik, Mehmet Ozhaseki, ayaa carabka ku adkeeyay in Duqa Magaalada uu qabtay shaqo aad u wanaagsan, "Eebbe ha barakeeyo waxyaabo badan oo wanaagsan oo la sameeyo," ayuu yidhi.
Khudbadaha kadib, Fuzuli Storey Junction waxaa loo furay salaadda, furitaanka kadib, Wasiirka Deegaanka iyo Magaalooyinka Mehmet Özhaseki wuxuu u adeegsaday Duqa magaalada Mustafa Çelik gaariga iyo marinka koowaad wuxuu marayay isgoyska isgoyska dabaqyada badan.
Nidaamka Tareenka fudud Saddex Xaafado Kayseri Ayaa Ka Gudba Xagga hoose